डिप्लोमा र प्रमाणपत्र पूर्ण नि: शुल्क को लागी temp 37 टेम्पलेट्स क्रिएटिव अनलाइन
लोला करील | | पुनरावृत्त, टेम्प्लेट, ट्यूटोरियलहरू
हामी सित्तैमा टेम्प्लेटहरूको श्रृंखलाको साथ फर्कन्छौं उद्देश्य ती डिप्लोमाहरूमा सेट गरिन्छ जुन प्राय: पाठ्यक्रमको अन्त्यमा दिइन्छ र त्यो सामान्यतया अध्ययन को एक पूरा स्तर प्रमाणित। ग्राफिक रूपमा व्यक्त गर्ने एउटा तरिका जुन कुनै खास विषयको व्यायाममा केहि समय खर्च गरेको छ र राम्रो तरीकाले पेशामा पुग्न सक्षम हुन पर्याप्त आधारहरू छ।
यस कारणका लागि, हामी तपाईंसँग kinds 35 नि: शुल्क टेम्पलेटहरू सबै प्रकारका डिप्लोमाहरूको लागि साझा गर्न जाँदैछौं, जस बीचमा तपाईं प्रश्नमा रहेको कामका लागि उत्तम एउटा फेला पार्न विभिन्न प्रकारको भिन्नता पाउन सक्नुहुन्छ। को त्यहाँ स्कूल को लागी, एकेडेमी वा केहि प्रतिस्पर्धा को लागी छ जो घर मा साना बच्चाहरूलाई खुशी र मनोरन्जन गर्न पौंडी पोखरीमा गरिन्छ। हामीले एउटा ट्यूटोरियल पनि समावेश गरेका छौं जहाँ हामी व्याख्या गर्छौं, चरण-देखि-चरण, कसरी PowerPoint मा एक डिप्लोमा बनाउन को लागी.
1 डिप्लोमाहरूको लागि टेम्पलेटहरूको चयन
1.1 पुरानो शैलीमा प्रशंसाको प्रमाणपत्र
1.2 गोल्डन पुरानो क्लासिक प्रमाणपत्र
1.3 सजावटी फ्रेमको साथ भिन्टेज डिप्लोमा
1.4 सुनौलो विवरण सहित लक्जरी प्रमाणपत्र
1.5 उपलब्धि को प्रमाणपत्र
1.6 रंग जियोमेट्रिक आकृतिहरूको साथ प्रशंसाको शानदार प्रमाणपत्र
1.7 प्रमाणपत्र टेम्पलेट डिजाइन
1.8 उपलब्धि टेम्प्लेटको हरियो बहुभुज प्रमाणपत्र
1.10 रातो त्रिकोणको साथ मान्यताको प्रमाणपत्र
1.11 पूर्ण रंगमा उपलब्धिको प्रमाणपत्र
1.12 क्लासिक फ्रेमको साथ डिप्लोमा
1.13 रंगीन बच्चाहरू डिप्लोमा टेम्पलेट
1.14 प्रमाणपत्र नीलो आकार र सुनको रेखाले सजाइएको
1.15 बाल पृष्ठभूमि क्लिपआर्ट जीत ड्राइंग
1.16 चमकदार लहराती डिप्लोमा टेम्प्लेट
1.17 प्रमाणपत्र लाइन सारांश
1.18 कलेज डिप्लोमा टेम्पलेट
1.19 डिप्लोमा र मोर्टारबोर्डको साथ पुस्तकहरूको पृष्ठभूमि
1.20 मोहरको साथ सुरुचिपूर्ण डिप्लोमा
1.21 पहेंलो र गुलाबी बहुभुज प्रमाणपत्र
1.22 सजावटी प्रमाणपत्र टेम्पलेट
1.23 सजावटी विवरणहरूको साथ सुरुचिपूर्ण डिप्लोमा
1.24 निलो ज्यामितीय आकारको साथ प्रमाणपत्र
1.25 रातो र कालो ज्यामितीय आकारको साथ आधुनिक प्रमाणपत्र डिजाइन
1.26 बच्चाहरूको लागि राम्रो डिप्लोमा
1.27 रंगीन अक्षरहरूको साथ डिप्लोमा टेम्प्लेट
1.28 हास्यास्पद बच्चाहरूको साथ डिप्लोमा केटा
1.29 रंगीन त्रिकोणको साथ स्नातक प्रमाणपत्र
1.30 सुनौलो सजावटी फ्रेमको साथ प्रमाणपत्र
1.31 प्रमाणन टेम्पलेट Cumpled
1.32 सजावटी फ्रेमको साथ सुरुचिपूर्ण डिप्लोमा
1.34 पुरानो डिप्लोमा टेम्पलेट
1.35 क्लासिक फ्रेमको साथ मेरिटको सजावटी डिप्लोमा
2 कहाँ फ्रि डिप्लोमा बनाउने
2.1 आकार उपकरण
2.2 Typographic संयोजन र पाठ पदानुक्रमका साथ खेल्नुहोस्
2.3 तपाई प्रोग्राम छाडेर साइन इन गर्न सक्नुहुनेछ
3 भर्चुअल डिप्लोमा कसरी बनाउने
3.3 1,2,3 प्रमाणपत्रहरू
डिप्लोमाहरूको लागि टेम्पलेटहरूको चयन
पुरानो शैलीमा प्रशंसाको प्रमाणपत्र
Este प्रशंसाको पुरानो शैली प्रमाणपत्र यो एक क्लासिक र धेरै सुरुचिपूर्ण विकल्प हो, गम्भीर र औपचारिक मामिलाहरूको प्रमाणित गर्न सही डिप्लोमा।
गोल्डन पुरानो क्लासिक प्रमाणपत्र
अर्को क्लासिक र स्टाइलिश विकल्प, यो गोल्डन पुरानो क्लासिक प्रमाणपत्र यो राम्रो विकल्प हो यदि तपाईं डिप्लोमा खोज्दै हुनुहुन्छ जुन भव्यता र विशिष्टता सार्छ।
सजावटी फ्रेमको साथ भिन्टेज डिप्लोमा
यदि तपाईं यहाँ धेरै सुन र उज्यालो टोनहरू हुनुहुन्न भने तपाईंसँग वैकल्पिक,aसजावटी फ्रेमको साथ पुरानो डिप्लोमा निलो टोनमा, स्क्रिप्ट र सेरिफ टाइपफेसको संयोजनको साथ, भव्यताले भरिएको।
सुनौलो विवरण सहित लक्जरी प्रमाणपत्र
Este सुनका विवरणहरूका साथ प्रमाणपत्र यो लक्जरी को प्रतिनिधित्व हो, क्लासिक डिजाइन तर आधुनिक टचको साथ। बेज टोनमा र सेरिफ र सेन्स-सेरिफ फन्टहरूको धेरै रोचक संयोजनको साथ।
Free० नि: शुल्क InDesign टेम्पलेट्स
उपलब्धि को प्रमाणपत्र
Este उपलब्धि को मान्यता प्रमाणपत्र यस संग्रहको सबैभन्दा औपचारिक विकल्प मध्ये एक हो, रातो लेटरहेड विचित्रको बेज र कच्चा टोनसँग विरोधाभास दिन्छ जसले यसलाई भिन्नताको स्पर्श दिन्छ।
रंग जियोमेट्रिक आकृतिहरूको साथ प्रशंसाको शानदार प्रमाणपत्र
Este ज्यामितीय आकारमा आधारित प्रमाणपत्र यो एक युवा र समकालीन विकल्प हो। रंगको प्रयोग र त्यो बाक्लो sans- काठ टाइपफेस मुख्य स्थान ओगटेको यो एक धेरै आधुनिक रूप दिन्छ।
प्रमाणपत्र टेम्पलेट डिजाइन
अन्य सुरुचिपूर्ण डिप्लोमाअघिल्लो भन्दा सरल। गोल्ड डिजाइनमा परिष्कृत र विशिष्ट स्पर्श दिनको लागि आदर्श रंग हो
उपलब्धि टेम्प्लेटको हरियो बहुभुज प्रमाणपत्र
Este डिप्लोमा ज्यामितीय आकार संग सजाइएको हरियो टोनमा यो एक सुरुचिपूर्ण र आधुनिक विकल्प हो जसले तपाईंलाई पक्कै पनि जित्नेछ। डिजाइन धेरै बहुमुखी छ र लगभग कुनै पनि परिस्थितिमा काम गर्न सक्दछ।
कालो र सुनको संयोजन धेरै रमणीय र विशिष्ट छ। पूर्व विलासी प्रमाणपत्र यो विकल्प तपाईं खोज्दै हुनुहुन्छ यदि तपाईं एक आधुनिक डिप्लोमा चाहनुहुन्छ भने, तर त्यो नै समयमा एक निश्चित औपचारिक र विशिष्ट चरित्र प्रसारण गर्दछ।
रातो त्रिकोणको साथ मान्यताको प्रमाणपत्र
अन्य आधुनिक र सुरुचिपूर्ण प्रमाणपत्र, र redले रातो त्रिकोणको साथ प्रशंसाको यो प्रमाणपत्रलाई अधिक युवा र आकर्षक रूप दिन्छ।
पूर्ण रंगमा उपलब्धिको प्रमाणपत्र
निलो र पहेलो, यस डिजाइनको मुख्य रंगहरू, पूर्ण रूपमा संयोजन गर्दछ। पहेंलो, तातो र colorको, र निलो, चिसो रंग, राम्ररी विवाह र एक अर्काको पूरक पूरक हुन्छ। यसमा पूर्ण र inमा उपलब्धि प्रमाणपत्र यो संयोजन आधुनिक र उल्लेखनीय डिजाईन सिर्जना गर्न कुञ्जी हो।
क्लासिक फ्रेमको साथ डिप्लोमा
यदि तपाईं कम र prefer मनपराउनुहुन्छ भने, यो तपाईं खोजी रहनु भएको प्रमाणपत्र हो। पूर्व क्लासिक फ्रेमको साथ डिप्लोमा यो एक न्यूनतम डिजाइन छ, केवल दुई र colors को लागी प्रकाश, गाढा प्रकाश, जो यसलाई धेरै परिष्कृत लुक दिन्छ।
रंगीन बच्चाहरू डिप्लोमा टेम्पलेट
यदि तपाईं बढि बालिश प्रमाणपत्रको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने यो मोडल बच्चाहरू डिप्लोमा एक धेरै रंगीन डिजाइन संग तपाईं यसलाई प्रेम गर्दछ। यो धेरै उपयोगी हुनेछ यदि, उदाहरणका लागि, यदि तपाईं आफैंलाई शिक्षणमा समर्पण गर्नुभयो र तपाईंको विद्यार्थीहरूलाई विशेष पुरस्कार दिन चाहनुहुन्छ भने।
प्रमाणपत्र नीलो आकार र सुनको रेखाले सजाइएको
एक धेरै सुरुचिपूर्ण डिप्लोमा, यो सीप्रमाणपत्र नीलो आकार र सुनको रेखाले सजाइएको यो लालित्य र राम्रो स्वाद exudes। सेन्स-सेरिफ टाइपफेस, विभिन्न आकारका, यस मोडेललाई अझ आधुनिक रूप दिनुहोस्।
बाल पृष्ठभूमि क्लिपआर्ट जीत ड्राइंग
शिक्षणका लागि अर्को ठूलो स्रोत। यो डिप्लोमा यो एक धेरै रमाईलो रूप छ र साना बच्चाहरु यो पक्का गर्न मन पर्छ। टाइपोग्राफिक छनोट एकदम सफल देखिन्छ र रेखाचित्रहरूले यस डिजाइनलाई रचनात्मक स्पर्श दिन्छ।
चमकदार लहराती डिप्लोमा टेम्प्लेट
Este हरियो र निलो टोनमा डिजाइनको साथ डिप्लोमा वक्र आकारहरूमा आधारित, यो एक उत्कृष्ट, विस्तृत र बहुमुखी विकल्प हो।
प्रमाणपत्र लाइन सारांश
डिजाइन यो प्रमाणपत्र यो उल्लेखनीय र रचनात्मक हो, आकारहरूको संयोजनले एक निश्चित आन्दोलन दिन्छ जुन यसलाई अघिल्लो भन्दा धेरै फरक विकल्प बनाउँदछ।
कलेज डिप्लोमा टेम्पलेट
यो डिजाइन बालिश र रमाईलो छ, चित्र को लागी एक धेरै को लागी उपयुक्त छ कलेज डिप्लोमा र रंगहरू कान्छोको ध्यान समेट्न निश्चित छन्। बहुरंगी टाइपोग्राफी यस मामला मा एक ठूलो सफलता!
डिप्लोमा र मोर्टारबोर्डको साथ पुस्तकहरूको पृष्ठभूमि
यस मामिलामा हामी तपाइँलाई तपाइँका साथीहरू, सहकर्मीहरू र उनीहरूको स्नातकमा परिवारलाई बधाई दिन एउटा टेम्प्लेट ल्याउँदछौं। को डिप्लोमा र मोर्टारबोर्डको साथ पुस्तकहरूको पृष्ठभूमि यो घटना को लागी धेरै नै उपयुक्त छ।
मोहरको साथ सुरुचिपूर्ण डिप्लोमा
लेटरहेड बनाउने रातो धनुको साथ सुनको पहेँलोको संयोजन यो डिप्लोमा एक सुरुचिपूर्ण र स्टाइलिश विकल्प।
पहेंलो र गुलाबी बहुभुज प्रमाणपत्र
Este पहेलो र गुलाबी मा बहुभुज डिजाइन संग प्रमाणपत्र यो एक धेरै राम्रो विकल्प हो यदि तपाईं रंगीन, आधुनिक र युवा डिप्लोमा खोज्दै हुनुहुन्छ।
सजावटी प्रमाणपत्र टेम्पलेट
यस संग्रहमा सब भन्दा उत्तम विकल्प मध्ये एक हो सजावटी प्रमाणपत्र टेम्पलेट यसले हामीलाई यसको भव्यता र यसको क्लासिक उपस्थितिमा जित्यो।
सजावटी विवरणहरूको साथ सुरुचिपूर्ण डिप्लोमा
सुनौलो टोनमा अर्को डिजाइन,aशोभनीय विवरणहरूले भरिएको सुरुचिपूर्ण डिप्लोमा, गम्भीर र औपचारिक अवसरहरूमा डेलिभर गर्न उपयुक्त।
निलो ज्यामितीय आकारको साथ प्रमाणपत्र
Este ज्यामितीय आकारको साथ प्रमाणपत्र नीलो र different्गका विभिन्न शेडहरूमा यो रमणीय छ तर अधिक आराम र युवा स्पर्शको साथ।
रातो र कालो ज्यामितीय आकारको साथ आधुनिक प्रमाणपत्र डिजाइन
यदि तपाईँ खोज्दै हुनुहुन्छ भने रंगीन आकारको साथ आधुनिक डिजाइन, रातो र कालो ज्यामितीय आकारको यो संयोजनले तपाईंलाई मोहित गर्दछ।
बच्चाहरूको लागि राम्रो डिप्लोमा
Este बच्चाहरूको लागि राम्रो डिप्लोमा रचनात्मक चित्रणले भरिएको एक धेरै राम्रो टेम्पलेट हो, एक धेरै रंगीन र रमाईलो डिजाइनको साथ।
रंगीन अक्षरहरूको साथ डिप्लोमा टेम्प्लेट
सानाका लागि अर्को डिजाइन, यो रंगीन अक्षरहरूको साथ डिप्लोमा टेम्प्लेट यो एक समान रमाईलो विकल्प हो, जबकि क्लीनर, कम लोड भयो। यस मामिलामा, उनीहरूले नरम रंगहरू संयोजन गर्न छनौट गर्दछ जुन यस प्रमाणपत्रलाई एक फरक स्पर्श दिन्छ।
हास्यास्पद बच्चाहरूको साथ डिप्लोमा केटा
यो डिप्लोमा यो एक आदर्श डिजाइन हो जुन आनन्द र गतिशीलता सार्दछ। डिजाईन वरपरको पहेंलो फ्रेमले यसलाई आधुनिक स्पर्श दिन्छ र विभिन्न र colors्गमा गोलाकार टाइपफेसको संयोजनले बच्चाको लागि डिजाइन गरिएको सर्टिफिकेट हुनै पर्ने रमाइलोको स्पर्श दिन्छ।
रंगीन त्रिकोणको साथ स्नातक प्रमाणपत्र
यो एक डिजाइन हो जुन यस संग्रहमा अधिक मनपर्दछ, यो युवा छ र दुबै बच्चाहरू र युवा मानिसहरूका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। ज्यामितीय आकार र र p्ग प्यालेटको संयोजन यो स्नातक प्रमाणपत्र एक सुपर रचनात्मक विकल्पमा र त्यो ग्राफिक डिजाइनको पोइन्ट जुन तपाईंलाई मनपर्दैन।
सुनौलो सजावटी फ्रेमको साथ प्रमाणपत्र
Este प्रमाणपत्र धेरै सुरुचिपूर्ण र औपचारिक होडिजाईनको सब भन्दा उल्लेखनीय विशेषता भनेको सुनौलो सजावटी फ्रेम हो जुन पाठलाई फ्रेम गर्दछ र यसलाई चमकदार बनाउने कामसँग समाप्त हुन्छ।
प्रमाणन टेम्पलेट Cumpled
यो प्रमाणपत्र टेम्पलेट क्लासिक र न्यूनतम डिजाइन र एउटा निश्चित भिन्टेज टचको साथ अनुसरण गर्दछ, यो बहुमुखी विकल्प हो, लगभग कुनै पनि परिस्थिति, उपलब्धि वा घटनाको लागि मान्य। रातो लेटरहेडले डिप्लोमामा र colorको एक स्पर्श थप गर्दछ।
सजावटी फ्रेमको साथ सुरुचिपूर्ण डिप्लोमा
निलो टोनमा यो क्लासिक विकल्प यो एक धेरै राम्रो विकल्प हो, डिजाइन एकदम सन्तुलित छ र पृष्ठभूमि को बनावटले यसलाई बिभिन्न स्पर्श दिन्छ। यदि तपाईंलाई औपचारिक अवसरको लागि प्रमाणपत्र आवश्यक छ भने सजावटी फ्रेमको साथ यो सुरुचिपूर्ण डिप्लोमा तपाईले खोज्नु भएको कुरा मात्र हो।
फ़िरोज़ा निलोसँग संयोजन सामन बम हो, यो आधुनिक प्रमाणपत्र यो उत्तम छ यदि तपाईं हालको, युवा र स्टाइलिश डिप्लोमा खोज्दै हुनुहुन्छ।
पुरानो डिप्लोमा टेम्पलेट
Este पुरानो डिप्लोमा टेम्पलेट यो अर्को धेरै नै क्लासिक र रमणीय विकल्प हो, सूक्ष्म रेखाका साथ पृष्ठभूमि र कालो तत्त्वहरूसँग विरोधाभासले यसलाई एक रमाईलो डिजाइन बनाउँदछ।
क्लासिक फ्रेमको साथ मेरिटको सजावटी डिप्लोमा
Este क्लासिक फ्रेमको साथ मेरिट डिप्लोमा आधारभूत सजावटी तत्त्वहरूको साथ यसलाई उत्कृष्ट टाइपोग्राफिक संयोजनको साथ एक सौन्दर्यपूर्ण डिजाइन बनाउन एउटा ठाडो डिजाइन, सरल र अझै धेरै सुरुचिपूर्ण अनुसरण गर्दछ।
कहाँ फ्रि डिप्लोमा बनाउने
यदि तपाई नि: शुल्क आफ्नो डिप्लोमा बनाउन चाहानुहुन्छ भने, PowerPoint एक धेरै राम्रो विकल्प हो। मुख्य रूपले प्रस्तुतीकरणहरूको लागि डिजाइन गरिएको यो कार्यक्रमले तपाईलाई आफ्नै डिजाईनहरू सजिलै सिर्जना गर्नका लागि अत्यन्त उपयोगी उपकरण प्रदान गर्दछ।
आकृति उपकरणको साथ, घुसाउनुहोस् ट्याबमा उपलब्ध, तपाइँ ग्राफिक तत्वहरू थप्न सक्नुहुन्छ जुन तपाइँको डिजाईन धेरै आकर्षक बनाउँदछ। थप रूपमा, तपाईं तिनीहरूलाई "आकार ढाँचा" प्यानलमा अनुकूलित गर्न सक्नुहुन्छ र "परिमार्जन बिन्दु" विकल्पमा गएर तपाईं अमूर्त आकारहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न आकारहरू संयोजन गर्दै, र color, आकार र वक्रसँग खेल्दै तपाईं धेरै मूल डिप्लोमा वा प्रमाणपत्र बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईं रचनाहरूलाई भोल्यूम दिन पनि ग्रेडियन्ट थप्न सक्नुहुन्छ।
Typographic संयोजन र पाठ पदानुक्रमका साथ खेल्नुहोस्
टाइपफेसहरूको मौलिक मूल्य हुन्छ डिजाईनमा। डिप्लोमाको अर्थमा निर्भर गर्दै तपाई केही टाइपोग्राफिक संयोजन वा अन्य छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाई नर्सरी स्कूलमा डिप्लोमा बनाउन जाँदै हुनुहुन्छ भने, उदाहरणका लागि तपाईले सेन्स-सेरिफ फन्ट र स्टाइल फन्ट प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। हस्तलिखित, र उज्ज्वल र हंसमुख रंगको साथ तिनीहरूलाई जोड्नुहोस्। अर्कोतर्फ, यदि यो अधिक गम्भीर र सुरुचिपूर्ण प्रमाणपत्र हो भने, तपाईं सेन्स-सेरिफ टाइपफेसको साथ सेरीफ टाइपफेस संयोजन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंलाई उत्तम विकल्प फेला पार्न प्रेरणा चाहिन्छ भने, तपाई जहिले पनि केहि जाँच गर्न सक्नुहुन्छ टाइपोग्राफिक संयोजन जुन हामी तपाईंलाई प्रस्ताव गर्छौं.
टाइपफेसमा ध्यान दिनको अतिरिक्त, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं फन्टको साइज र मोटाईसँग खेल्नुहोस् वर्गीकरण स्थापना गर्न। यदि तपाईं सफल हुनुभयो भने, तपाईको डिप्लोमा अधिक सुस्पष्ट हुनेछ र त्यसकारण अधिक दृश्यात्मक आकर्षक।
तपाई प्रोग्राम छाडेर साइन इन गर्न सक्नुहुनेछ
PowerPoin को नयाँ संस्करणहरूमातपाईंसँग «ड्र» ट्याब उपलब्ध छ। यस उपकरणले तपाईंलाई सजिलै सित स्ट्रोक गर्न अनुमति दिन्छ। यसले तीन प्रकारको ब्रश प्रदान गर्दछ: कलम, पेन्सिल र हाइलाइटर। ती सबैको कन्फिगरेसन परिमार्जन गर्न सकिन्छ ताकि तपाईं मोटाई र रंग अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ।
यो उपकरण हुन सक्छ तपाईंको प्रमाणपत्र सजाउन उपयोगी, विशेष गरी यदि तपाईं चित्रकलामा अस्खलित हुनुहुन्छ, तर सब भन्दा चाखलाग्दो कुरा यसलाई धन्यवाद तपाई डिप्लोमामा हस्ताक्षर गर्न सक्नुहुनेछ प्रोग्राम छोड्नु बिना नै। तपाईंले केवल एक कालो बलपोइन्ट पेन छान्नु पर्छ, राम्रो पोइन्टको साथ, र कागजातमा हस्ताक्षर गर्नुहोस्। तपाईं धेरै समय बचत हुनेछ!
भर्चुअल डिप्लोमा कसरी बनाउने
PowerPoint डिप्लोमा बनाउन मात्र विकल्प छैन, तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ कुनै प्रोग्राम स्थापना गर्न को लागी आभासी डिप्लोमा। अनलाइन प्रमाणपत्रहरू सिर्जना गर्न यहाँ केहि धेरै उपयोगी उपकरणहरू छन्। सब भन्दा राम्रो कुरा यो हो कि तिनीहरू पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छन्।
क्यान्भा एक अनलाइन डिजाइन उपकरण हो र अत्यधिक बहुमुखी सामग्री निर्माण। यसले लगभग सबै चीजहरूको लागि टेम्पलेट्स प्रदान गर्दछ र, निश्चित रूपमा, तपाईं सबै प्रकारका प्रमाणपत्रहरूका लागि टेम्प्लेटहरू पनि फेला पार्नुहुनेछ। नि: शुल्क उपकरण हुनु तपाईले चाहानु भएको टेम्पलेट छनौट गर्न, सम्पादन गर्न र अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ वेबसाइट नछोडी। तपाईले चाहानु भएको प्रमाणपत्रको प्रकार निर्धारण गर्न खोज इञ्जिन प्रयोग गर्नुहोस् र अझ राम्रा सुझावहरू पाउनुहोस्। क्यान्भासँग प्रो संस्करण पनि छ, यद्यपि नि: शुल्क संस्करणको स्रोतसँग तपाईसँग पर्याप्त भन्दा बढी छ, मात्र ध्यान दिनुहोस् र प्रतिबन्धित टेम्प्लेटहरू प्रयोग नगर्नुहोस् कि एक भुक्तानी आवश्यक छ।
यस वेबसाइटमा तपाईं पाउनुहुनेछ डिप्लोमा को विभिन्न मोडेल। सब भन्दा चाखलाग्दो कुरा यो बाहेक तपाईंलाई PDF मा डाउनलोड गर्न अनुमति दिन्छ तिनीहरूलाई प्रिन्ट गर्न र हातले पूर्ण गर्न, यसले तपाईंलाई दिनुहुन्छ वेबमा सिधा तिनीहरूलाई भर्न विकल्प अन्तिम संस्करण डाउनलोड गर्न।
यद्यपि वेबसाइट र टेम्प्लेटहरू अंग्रेजीमा छन्, in 1,2,3 प्रमाणपत्रहरू तपाईं टेम्पलेटहरूको पाठ सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ त्यसो भए यो समस्या हुने छैन। मलाई भर्चुअल सर्टिफिकेटहरू बनाउनको लागि यस वेबसाइटको बारेमा केँ मनपर्दछ? त्यो हो डिप्लोमा १००% सम्पादन योग्य छ। तपाईं रंग, आकार, अभिमुखिकरण, टाइपोग्राफी छनौट गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नै छविहरू थप्न सक्नुहुनेछ यो नि: शुल्क हो र प्रयोग गर्न सजिलो छ!
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » पुनरावृत्त » टेम्प्लेट » Free 37 नि: शुल्क डिप्लोमा टेम्प्लेटहरू
केवल एक प्रभावशाली संकलन!
केहि समय अघि मैले त्यस्तै बनाएको थिएँ तर म टोपको गुणस्तर, शीर्षकहरू अर्डर गर्ने तरिका र डिप्लोमाको संग्रहमा लैजाउँदछु।
यो एक स्वस्थ ईर्ष्या हो haha ​​... बधाई!
अभिवादन Esteban! मलाई मनपर्‍यो कि तपाईंलाई कम्पाइलेसन मनपर्‍यो!
धन्यबाद, दर्शकहरु लाई असाधारण योगदान। उत्कृष्ट डिप्लोमा र प्रमाणपत्र ढाँचा, राम्रो एक पाउन सकेन। म १० तारे र पूर्ण ब्रह्माण्ड दिन्छु। साँच्चिकै धेरै आभारी।
माचलाई जवाफ दिनुहोस्
लुइस लोपेज अभालोस भन्यो
यो एक उत्कृष्ट संग्रह हो, पूर्ण, निर्देशित र धेरै उपयुक्त। धेरै धेरै धन्यवाद। डा। लुइस लोपेज
लुइस lópez Avalos लाई जवाफ दिनुहोस्
रिकार्डो आर भन्यो
धेरै धेरै धन्यवाद !! सुपर सिफारिश!
रिकार्डो आर लाई जवाफ दिनुहोस्
एडविन क्वाइस्पेरो निना भन्यो
प्रमाणित टेम्पलेट्समा धेरै चासो।
EDWIN QISPECURO NINA लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार भगवान तपाईलाई धन्यबाद दिनुहोस् कृपया मलाई तपाईले फ्रेमको साथ डिप्लोमा बनाउनका लागि मार्गनिर्देशन गर्न चाहानुहुन्छ, र ठूलो खुला बाइबलको स्पष्ट पृष्ठभूमि छ र म यो कुनै समस्या बिना नै बोक्ने जानकारी लेख्न सक्छु। धन्यवाद
नमस्ते, मसँग एउटै प्रश्न छ कि केटी अलेक्सान्ड्राले सोधे, म पनि त्यस्तै केही गर्न खोजिरहेको छु र म तपाईंलाई धन्यवाद दिन सक्दिन।
के तिनीहरू केवल चित्रण मात्र हुन्? किन यो स्वतन्त्र भन्छ? तपाईं तिनीहरूलाई डाउनलोड र प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न।
Heuresis लाई जवाफ दिनुहोस्
जहाँ फ्रि फन्टहरू डाउनलोड गर्ने